बीमा समितिका ४ निर्देशकलाई नयाँ जिम्मेवारी, कसले के पाए ? – BikashNews
बीमा समितिका ४ निर्देशकलाई नयाँ जिम्मेवारी, कसले के पाए ?
२०७६ जेठ २८ गते १९:४७ विकासन्युज
काठमाडौं । बीमा समितिका चार जना निर्देशकहरुले नयाँ जिम्मेवारी पाएका छन् । बीमा समितिमा चार जना निर्देशक रहने व्यवस्था छ । बीमा समितिमा लामो समयदेखि दरबन्दी अनुसार निर्देशक पदपुर्ति हुन सकेको थिएन् । कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त भएको करिब ६ बर्षपछि राजुरमण पौडेलले जिम्मेवारी पाएका छन ।
त्यस अघि ४ वटा निर्देशक दरबन्दीमा पौडेल र कमलराज रेग्मी मात्रै कार्यरत थिए । समितिले पछिल्लो पटक जेठ २३ गते दिनेशकुमार लाललाई प्रतिष्पर्धाद्धारा निर्देशक पदमा बढुवा गरेपछि दरबन्दी अनुसार ४ जना निर्देशकको पदपुर्ति भएको हो । अब बीमा समितिमा कमलराज रेग्मी, सुशिल सुवेदी, पुजन अधिकारी र दिनेश कुमार लाल गरि ४ जना निर्देशक भएका छन् ।
उनीहरुलाई समितिले जिम्मेवारी समेत तोकिदिएको छ । निर्देशक कमलराज रेग्मीलाई अनुसन्धान, विकास तथा बीमालेख महाशाखाको नेतृत्व दिईएको छ । अर्का निर्देशक सुवेदीले सुपरिवेक्षण, कृषि तथा लघु बीमा तथा पुनर्बीमा शाखाको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
त्यस्तै, दिनेश कुमार लाललाई कानुन महाशाखा प्रमुख बनाईएको छ । पुजन अधिकारीले भने नियमन तथा मानव संसाधन महाशाखाको नेतृत्व पाएकी छिन् । बीमा समितिले पछिल्लो पटक दरबन्दी अनुसार धमाधम कर्मचारी भर्ना गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थानले लञ्च गर्यो एप, बीमाबारे जानकारी लिन सकिने